eNasha.com - व्याकरण सिकाउँदै सुदीन
व्याकरण सिकाउँदै सुदीन
नेपालमा र्याप गीतसङ्गीत शुरु भएको धेरै भएको छैन । पाँच/छ वर्षघि निर्ण्रय श्रेष्ठ र उनका केही साथीहरुले शुरु गरेको यो विधा अंग्रेजी गीतबाट विस्तारै नेपाली घुसाउन थाले, तब यसलाई मन पराउनेको संख्या बढ्न थाल्यो । यसको लोकप्रियतामा अर्को नाम पनि थपिन्छ, गिरिश पोखरेल । गिरिश र उनका साथी प्रनीलको जोडीले यो विधालाई झनै लोकप्रिय बनाए । पछिल्लो समयमा लोकप्रियता थप्ने काम गरेका छन्, र्यापर डीए सिक्स्टी नाइन । उनलाई पहिलो पटक म यस्तो छु म उस्तो छु...ले चिनायो । त्यसपछि आँखाभरि देख्छु....मा उनको र्याप शब्दले मान्छेको ध्यान खिँच्यो । तर शी इज् द बम र च्याङ्बा होई च्याङ्बाले त उनलाई र्याप स्टार नै बनाइदिएका छन् ।
आउनुहोस्, आज हामी यिनै लोकप्रिय गायकसँग भलाकुसारी गरौँ ।
बच्चा बेलामा तपाइँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो -
एउटा साधारण बालक ।
पढाइमा नि ?
म राम्रो विद्यार्थी थिएँ ।
सङ्गीतमा कुन बेला रमाउन थाल्नु भयो - स्कूलमा कतिखेर गाउन थाल्नु भयो ?
स्कूलका केही प्यारेन्ट्स डेमा मैले गीत गाएको सम्झन्छु ।
तपाइँको प्रेरणा तपाइँको मामा सीपी शर्माको कत्तिको योगदान छ ?
खासमा उहाँले नै मलाई गीतार कसरी बजाउने भनेर सिकाउनु भएको थियो ।
कुन बेला तपाइँले गीतार छुनु भयो ?
त्यस्तै ६/७ कक्षामा पढ्दा ।
घरमा बुवा-आमाले सङ्गीतमा लाग्न वा नलाग्न कुनै दवाव दिनु हुन्थ्यो ?
त्यस्तो केही थिएन । सङ्गीत चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर जस्तो मात्र थियो ।
एसएलसी सकिएपछि तपाइँले शास्त्रीय सङ्गीत सिक्नु भयो नि - किन ?
बुवा त्यसबेला प्रकाश साप्ताहिकको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो । त्यही पत्रिकाको कार्यालयमुनि एउटा सङ्गीत सिकाउने संस्था थियो । जसमा मीरा राणाले पनि सिकाउनु हुन्थ्यो । फर्ूसदको समय सदुपयोग गरौँ भनेर मैले करिब एक वर्षजति त्यहाँ सङ्गीत सिकेँ ।
तपाइँ पछि सुगम पोखरेलसँग रत्नराज्य कलेजमा नजिकिनु भएर ग्रुप पनि बनाउनु भयो, द स्पोक्स् ग्रुप । तर तीन वटा गीत सँगै गाउनु भएको पनि थिएन, छुट्टिनु भयो किन ?
हाम्रो झगडा भएर, मारामार भएर छुट्टिएका होइनौँ । एउटा समय यस्तो भयो कि हामी नजिक बन्यौँ । त्यो नजिक भएको समयमा सुगम र मैले सँगै गीत रच्थ्यौँ, बनाउँथ्यौँ र गाउँथ्यौँ । यसो गर्दागर्दै हामीले ब्याण्डका तर्फाट भनेर तीन वटा गीत तयार पार्यौँ । तर पछि सुगमले एक्लै गाउँछु भन्ने प्रस्ताव ल्यायो । यसमा मैले रोक्ने कुरा थिएन । किनभने मान्छेले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो सिर्जना गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो र मैले हार्दिकताका साथ उसको निर्ण्रय स्वीकृति जनाएँ ।
सुगमले गीत गाएर एल्बम निस्केर हिट हुँदा तपाइँलाई कहिल्यै 'कन्टेम्पररी जेलसनेस' भएन ?
त्यस्तो हुँदैन किनभने मेरो लाइन् के हो, उसको लाइन् के हो भन्ने कुरामा म स्पष्ट थिएँ । फेरि लोकप्रियता र माया भन्ने कुरा अलिअलि भाग्यको कुरा पनि हो नि, होइन र ?
पछि तपाइँ गिरिश प्रनीलको म यस्तो छु म उस्तो छु... मा देखिनु भयो । उहाँहरुसँग कसरी सङ्गत बढ्यो ?
खासमा सुमगसँग मेरो सङ्गत कम हुन थालेपछि मेरो सङ्गत गिरिश-प्रनीलहरुसँग बढी हुन थाल्यो । उहाँहरुको सङ्गतले मलाई र्यापतिर रुचि झन् बढेर आयो । उहाँहरुले मलाई र्याप के हो, कसरी लेख्ने, कस्तो र्याप प्रभावकारी हुन्छ आदि कुरा थाहा पाउन थालेँ । यसले गर्दा म गायनका अन्य विधाभन्दा र्यापतिर तानिएँ ।
तपाइँ पछि र्याप गीत लेखक पनि हुनु भयो, कसरी लेख्न शुरु गर्नु भयो ?
यसमा म गिरिश-प्रनीलको ज्यादै आभारी छु, जसले मलाई लेख्न सिकाउनु भयो । यो खासमा पोएट्री हो, कवितात्मक हुन जरुरी छ ।
अहिले तपाइँको लोकप्रियता यस्तो छ कि हरकोही मेलोडी गायक तपाइँलाई गवाउन चाहन्छ, कस्तो लागिरहेको छ ?
त्यही त मलाई चित्त बुझ्दैन । त्यही भएर मैले केही प्रख्यात गायकहरुको र्याप गाउने अनुरोधलाई अस्वीकार गरिसकेँ । उहाँहरुलाई मेरो अनुरोध के छ भने अरुको बुइँ चढ्न छाडिदिनुस् र आफ्नो सिर्जनामाथि बढी विश्वास गर्नुस् ।
तपाइँमा अहम् त बढेको होइन - राम्रा गायकले अनुरोध गर्नु त राम्रो होइन र ?
अहम् बढेको होइन । उहाँहरुले उहाँहरुको लागि अनुरोध गर्नु भएको हो, मेरो लागि होइन । एउटा राम्रो आधुनिक गीतलाई अत्तो न पत्तोसँग र्याप राख्दा राम्रो हुँदैन भन्ने लागेर मैले गाउन अस्वीकार गरेको हुँ ।
तपाइँको यस्तो लोकप्रियता बढ्दा पनि एल्बम निकाल्नेबारे पछिसम्म सोच्नु भएन, किन ?
शायद समय नआएकाले होला ।
एक महिनाअघि तपाइँहरुको एल्बम ब्याकरण अफ र्याप बजारमा आएको छ, खासमा ब्याकरण अफ र्याप नाम किन राख्नु भएको ?
अघि तपाइँले जुन कुरा सोध्नु भएको थियो, मेलोडी गायकहरुले हामी र्यापरहरुलाई खाली ठाउँ भर्ने वस्तुका रुपमा लिएकाले अस्वीकार गरेको बताएँ । हो, र्याप के हो, किन गाउने, कसरी गाउने, त्यसमा मेलोडी कसरी राख्नर्ुपर्छ भनेर अरुलाई सिकाउन हामीले व्याकरण अफ र्याप निकालेका हौँ । त्यो हावा गीत होइन, यसको पनि आफ्नै व्याकरण हुन्छ, शैली र शिल्प हुन्छ भनेर बुझाउन यो एल्बम निकालिएको हो ।
एल्बमभित्र त्यस्तो के खास छ ?
मैले माथि जे भनेँ, त्यही खास हो ।
तपाइँले यो एल्बममा अरु साथी पनि थप्नु भएको छ । आसिफ शाह र अमित । र, समूहको नाम पनि युनिटी राख्नु भएको छ, किन ?
म सामूहिक काममा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ । आसिफ चाहिँ हाम्रो अभिभावकजस्तो भएकाले उसलाई राखेको हो । अमित पनि एउटा राम्रो गायक हो । हामी मिलेर केही गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासले यो समूह बनेको हो, जसलाई युनिटी भन्ने गरेका छौँ ।
तपाइँ एउटा समाचारवाचक पनि हुनुहुन्छ, एउटा र्यापर पनि । यो दुवै व्यक्तित्व एक अर्कामा ज्यादै फरक छैनन् र ?
ठीक भन्नु भयो, यो ज्यादै फरक पेशा हो । समाचारवाचक र र्यापर दुवैको महत्व र जिम्मेवारी ज्यादै फरक छ । तर म आफूलाई जहिले पनि सञ्चारकर्मीका रुपमा रमाउन चाहन्छु । र्याप गायन चाहिँ म आफूभित्रको व्रि्रोह बोल्न उपयोग गर्ने एउटा थलो हो ।
तपाइँले र्याप गाएको देख्दा तपाइँको बाबा चर्चित राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेललाई छोरो बिगार्यो भन्नेहरु पनि छन् भन्ने सुनेको छु । कस्तो लाग्छ, यस्तो सुन्दा ?
यो ज्यादै वाहियात् कुरा हो । कतिपय गीतका शब्द, तिनका अर्थ र तिनका व्यापकताका बारेमा म बाबासित सरसल्लाह लिने गर्दछु । उहाँले पनि मलाई यस्ता कुरामा ज्यादै हौसला दिइरहनु भएको छ । बरु तपाइँ आफैँ भन्न सक्नु हुन्छ मलाई हेरेर, म सुध्रिएको छु कि बिग्रिएको !
गायक सङ्गीतकार लुकेका कुरा रिलिज समुद्रपार क्या बात ! तातोपीरो नेपाली तारा ट्रयाक बाहिर अवार्ड कीर्तिमान विचार भिडन्त प्रेम र विवाह उपलब्धि पेज थ्री गायिका रुचि गीतकार कन्सर्ट